FAMPIASAM-BOLA: Azo hanorenana orinasa ny 20.000 Ar | déliremadagascar
FAMPIASAM-BOLA: Azo hanorenana orinasa ny 20.000 Ar
Socio-eco	 14 mars 2018 R Nirina
Mampitaintaina ny tanora Malagasy mahavita fianarana ny fahazoana asa. Amin’ny maha mpampiofana an’i Rojo Andrianasolo, nilaza izy fa azo atao ny manangana orinasa miainga amin’ny 20.000 Ariary. Tsy voatery volabe no ampiasaina fa ny ny fomba fanodinana azy no zava-dehibe. Safidy tsara kokoa ny fanodinana ny 20.000 Ariary toy izay ho laniana hividianana toaka na lasopy. Toe-tsaina mpandraharaha no tanjona. Manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana ihany koa ny ity filoha tale jeneralin’ny “groupe E-media” ity mba hihaino ny hetahetan’ny tanora.
Folo taona niainana tao anatin’ny tontolon’ny serasera Rojo Andrianasolo. Manana “Agence de communication” izy, izay ao anatin’ny “Groupe E-media” ihany. Tsy nisakana azy nanovo lalam-piofanana hafa anefa izany. Manana diplaoma “master II” amin’ny serasera, “marketing” izy. Nanamafy ny traikefa efa nananany momba fanabeazana ihany koa Rojo Andrianasolo. Diplaoma faha-telo hananany ny Master II amin’ny “science de l’éducation” . Fianarana ny fiainana. Mandalina ny « diplomatie et relations internationales » eny amin’ny ENAM (Ecole Nationale d’Administration de Madagascar) izy ary an-dalam-panomanana ny “Doctorat” momba ny “sociologie et développement” ihany koa izy amin’izao fotoana izao. “Manentana ny tanora hianatra hatrany ny tenako na dia efa tonga amin’ny sehatra ambony aza. Tsara ny manovo fahalalana raha mbola azo atao”.